Puntland oo shaacisay xilliga la tooganayo raggii kufsaday oona dilay AUN Caa’isha Ilyaas | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo shaacisay xilliga la tooganayo raggii kufsaday oona dilay AUN Caa’isha...
Puntland oo shaacisay xilliga la tooganayo raggii kufsaday oona dilay AUN Caa’isha Ilyaas
Waa Sawirka Allaha u naxariistee Caa’isha Ilyaas Aadan. /Sawir hore/ Keyda Halqaran.com
Boosaaso (Halqaran.com) – Maxamuud Xasan Aw Cismaan oo ah xeer Ilaaliyaha Guud ee Puntland, ayaa Axaddii maanta sheegay in ragga loo xukumay kufsigii iyo dilkii Caa’isha Ilyaas Aadan loogu gaystay Magaalada Gaalkacyo la toogan doono bisha soo socota.
Maxkamadaha kala duwan ee Puntland ayaa saddex nin dil ugu xukumay kiiska ku aadan kufsigii iyo dilkii Caa’isha Ilyaas loogu gaystay Magaalada Gaalkacyo, bishii February ee sanadkii hore.
Xeer Ilaaliyaha ayaa Warbaahinta u sheegay in saddexdaasi nin la toogan doono 11-ka bisha February, isagoo xusay in lagu toogan doono fagaare ku yaala Magaalada Boosaaso, saacaddu marka ay tahay sideeda subaxnimo (8:00am), xilliga Geeska Afrika.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo toddobaadkii hore wax laga weydiiyay halka ay ku dambeeyan raggii loo xukumay kiiska Caa’isha Ilyaas ayaa sheegay inay taasi tahay mid u taala Garsoorka Puntland.
Caa’isha Ilyaas oo 12 jir ahayd ayaa waxaa falka loo gaystay lagu sheegay midkii ugu xumaa ee ka dhaca Magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaanba Puntland, taariikhda inta ay qoreyso.
Ugu dambeyn, kufsigan ayaa dareen argagax leh ku abuuray shacabka Soomaaliyeed, dal iyo dibadba, waxayna dadweynuhu iyo qoyska Caa’ishaba ay sheegeen inay samir siin u noqon karto, iyadoo tiirka la geeyo kuwii falkaasi arxanka daran gaystay.
Caa’isha Ilyaas Aadan
Xilliga la toogano raggii kufsaday hadane dilay Caa'isha